Momba anay - Huiyuweiye (Beijing) Fluid Equipment Co., Ltd.
Hyuweiy (Beijing) Fluid Equipment Co., Ltd dia sampana ao amin'ny Beijing Huiyuweiye international Environmental Engineering Co., Ltd. (http://www.bjhuiyuguoji.com/index.html)
Izy io dia orinasa teknolojia avo lenta izay mamokatra fitaovana misy tsiranoka, fikarohana sy fampandrosoana ny fampitaovana, famokarana, varotra ary serivisy ao anaty iray, miaraka amina ekipa matihanina matanjaka, fizotran'ny famokarana faran'izay tsara, kalitaon'ny vokatra tsara, serivisy haingana, hanomezana ho an'ny mpampiasa karazana vahaolana ranoka. Miara-miasa amin'ny oniversite maro izahay hananganana fifandraisana fampandrosoana maharitra. Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny laboratoara fikarohana sy famokarana indostrialy ary sehatra hafa. Manana injeniera mekanika matihanina, injeniera elektrika, injeniera OEM, ary varotra matihanina izahay ary aorian'ny fivarotana ekipa serivisy, namorona matihanina, tanora, ny fikatsahan'ny ekipa tonga lafatra.
Ny orinasanay dia miorina amin'ny University of Science and Technology Beijing, Harbin Institute of Technology, Hebei University of Technology, Hebei United University ary oniversite sy oniversite hafa, miantehitra amin'ny tombony lehibe amin'ny talenta teknika, nampiditra siansa sy teknolojia mandroso avy amin'ny firenena vahiny ary nanomboka miasa amin'ny indostrian'ny zavamaniry marina. ny tsipika famokarantsika dia misy paompy peristaltika, paompy syringe laboratoara, paompy syringe indostrialy, paompy plunger ary paompy OEM arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa. Hatramin'izao dia manana andiany maodely maherin'ny 40 amin'ny famokarana modely izahay. Andrana matihanina ny vokatra, nahatratra ny sehatra mandroso iraisam-pirenena izy ireo.
Nandritra ny taona maro, ny mpitarika ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny foto-kevitra "orinasan-tsiansa sy teknolojia", manadihady ny lalam-pampandrosoana samihafa sy maharitra.
Ny fomba fitantanana mandroso dia ny familiana amin'ny fivoaran'ny Huiyu. teknika faran'izay tsara dia ny sambo fampandrosoana an'i Huiyu, fihaonana amin'ny firoboroboan'ny siansa sy ny haitao fampandrosoana, Huiyu dia tsy maintsy mahay sambo. Sahia no ho voalohany.